Faraway: Puzzle Escape Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဝေးလံ: ပဟေဠိ Escape
ဝေးလံ: ပဟေဠိ APK ကို Escape
အတွင်းရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်း Escape ဝေးလံ: ပဟေဠိ Escape ကြောင်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပဟေဠိအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ ဒီအခန်းကလွတ်ဂိမ်းဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့ပဟေဠိနိုင်စွမ်းထွက်ပြေးလာသူစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ဂိမ်းတစ်ခုမှာ! ကျနော်တို့တကမ္ဘာလုံးသန်းပေါင်းများစွာက featured နှင့် adored ပြီအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။ ROOM တွင်ထွက်ပေါက်ပဟေဠိဂိမ်း ကြောင်းလုံးဝ, သင့်စိတ်ထဲစိန်ခေါ်သငျသညျ captivate & အံ့သြဖွယ်မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းဖျော်ဖြေရေးနာရီပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏အဘ၏ခြေရာကိုနင်းလမ်းလျှောက်ပါတယ်။ သူကဆယ်နှစ်အကြာပျောက်ဆုံးသွားသူကိုပုံမှန်မဟုတ်သောအပိုငျးအတစ်စုဆောင်းခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ခရီးတစ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ယဉ်ကျေးမှုအဟောင်းပြိုကျအပျက်အယွင်းမှသဲကန္တာရနှင့်အိုအေစစ်ထံမှသင်တို့ယူပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသင်သည်သူတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို သိ. ထိုက်နေပါလျှင်ကြည့်ဖို့ devices နဲ့ပဟေဠိဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စောငျ့ရှောကျ, ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်း, devices များ manipulate နှင့်ဗိမာနျတျော labyrinths မှလွတ်မြောက်ရန်ရှငျးမလငျးပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်။
ထွက်ပေါက်ပဟေဠိတွေနဲ့ထုပ်ပိုး 18 ခမ်းနားဘုရားကျောင်း Explore ။ Turn, စူးစမ်း, ထင်နှင့်အမှန်တကယ်သင်၏မျက်စိဖွင့်, သငျသညျပဟေဠိဂိမ်းလျှော့ပေါ့ထွက်ပေါက်ဂိမ်းများနှင့် 3D ၏ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါင်းစပ်အတွက်အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်။
ကမျက်နှာပြင်ပေါ်ထက်ပိုလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရရှိထားသူဖြစ်သော 3D ကမ္ဘာကြီးသွားလာရလွယ်ကူတယ်။ သင်ထွက်ပေါက်ဂိမ်းအမျိုးအစားထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အများဆုံးစိတ်ကိုဖမ်းစားဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တေးသံတစ်ခုမှာ။
သင့်မိသားစုမှဖြစ်ပျက်ရှာရန်သင့်အဘ၏ပျောက်ဆုံးနေသောဒိုင်ယာရီထဲကနေစာမကျြနှာကိုစုဆောင်းပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုစိန်ခေါ် ယူ. လုံးဝသင်ထိတွေ့ဆက်ဆံလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးကပဟေဠိဂိမ်း!
သင်မဝယ်ရှေ့တော်၌ထိုထွက်ပေါက်ဂိမ်းကြိုးစားကြရ။ ပထမဦးဆုံးအ9အဆင့်ဆင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါ! ဝေးလံ, အထင်ကြီးကြောင်းစွဲငြိဖွယ်ရာမူရင်းပဟေဠိအတူဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံဇာတ်လမ်းခံစားရသည်။
18 ဖုန်းများနှင့်လည်းတက်ဘလက်ကိရိယာများပေါ်တွင်ထွန်းလင်း: အဆိုပါပဟေဠိဂိမ်းသစ်ကို9အပေါ်လှပသောကြည့်ရှုသည်။ လက်ရာမြောက်သောကြည့်သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်များနှင့် astoundingly အသေးစိတ်ဂရပ်ဖစ်ခံစားပါ။
ပဟေဠိ Escape: ဝေးလံနှင့်အတူအခန်းတစ်ခန်းလွတ်ဂိမ်း & ပဟေဠိအပေါငျးတို့သသစ်ကိုအံ့သြကမ္ဘာ Enter!
TWO (2) သစ်အခမဲ့ level!
90.86 ကို MB
Puzzly - ပဟေဠိ ...
ဦး နှောက်စမ်းသပ်မှု -